Rick Chavie Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Rick Chavie
Rick Chavie akagadzwa CEO we EnterWorks muna Chivabvu 2015. Akauya ku EnterWorks mushure mekushandira seSVP, Global Solution Management nehybris uye SAP's Customer Engagement neCommerce boka, kwaakaunza pamwechete digitaalinen uye yepanyama kutengeserana uye CRM midziyo yeisina musono zviitiko zvevatengi.
Imwe ongororo ichangoburwa yakawana kuti 66 muzana yemafambiro ekutenga pamhepo anosanganisira echinhu chinoshungurudza. Vatengi vari kutsvaga kwenguva yakareba, yemafungiro ekubatana inoenda kupfuura kutenga mabhatani uye zvakanangwa kushambadzira. Ivo vanoda kunzwa vanofara, vakasununguka kana vanofara pavanotenga online nemutengesi. Makambani anofanirwa kushanduka kuti aite hukama hwepamoyo nevatengi uye vagadzire kuvimbika kwenguva refu kune pesvedzero inopfuura yekutenga kamwe chete. Tenga mabhatani uye kushambadzira kwakakurudzirwa pasocial media